GALITAANKA IYO KA BIXIDA
Home > Parent Resources > Arrival and Dismissal > Arrival and Dismissal - Somali
Keenista ardayda Subaxii
Iskuulka waxaa la furaa 8:45 subaxnimo. Ardayda looma ogolaan doono inay soo galaan inta ka horeysa 8:45. Waqtigaan ka hor kormeero ma joogo.
8:45-9:00 subaxnimo Ardayda waa in lagu dajiyaa Albaabka 7. Shaqalaha ayaa jooga ee soo gelin doona (waxuu ku yalaa jidka 49aad ee u dhow goobta ilmaha ku ciyaraan).
Ardayda looma ogo’laan doono in lagu dajiyo iskuulka hortiisa maxaa yeelay waxaa loogu talagalay basaska ama albaabka 1, tasoo sidoo kale loogu talagalay basaska, shaqalaha, iyo gawaarida kulamada. Admiga, dhaqan celiyahaya ama maamulaha dugsiga ayaa u tilmaami doona qofka mas’uulka ah inay ardayga ku dajiyaan albaabka 7.
Haddii ardaygagu kasoo daaho iskuulka (waxii kadanbeya 9subnimo), waad inaad gambaleelka albaabka 1 kayerisaa, lasoo gashaa ardaygaaga kana saxiixdaa miiska admiga.
Hadii aadan lasoo galin ardaygaaga, waa inay ka-saxiixaan miiska admiga, ka qataan warqad, waxaana loo qoraayaa daahis, ama habsan hadii ay soo daaheen inka badan 15 daqiiqo.
Waxaan aaminsanahay in imaanshaha iskuulka uu taageero guusha waxbarashada Dugsiga Dhexe ee Justice Page. Daahista badan ayaa u horseedi karta niyadjab ka waxbarashada iyo horimarka waxbarasho. Daahista ayaa sidoo kale noqon karta dhaqan xumo.
**Hadii ardaygaagu uu la kulmaayo macalin, waa inay ka heystaan macallinka warqad qoran oo ay ku qoran tahay tariikhda, waxtiga, magacaga ardayga, iyo saxiixa macalinka sida ay usoo galaan dugsiga. Waana inay lajoogaan macallinka ilaa waqtiga quraacda laga gaarayo. Warqad la’aan = soo gelis la’aan.
Haddii aad qadeysid ardaygaaga inta ka horeysa 3:45, fadlan kasoo gal albaabka 1 kana saxiix xafiiska weyn ee ay joogaan Chelsea iyo Mary. Ayagaa ardayga kuugu yeerayo.
Waxii ka danbeeya 3:45, inta lagu gudu jiro bixista, waa inaad ka qadataa ardaygaaga albaabka 7. Gaarigaaga ma dhigan kartid ama kuma sugi kartid barkinka u dhow albaabka 1. Waxaan leenahay basas u baahan iyo shaqaalo rabo inuu ka baxo meesha. Waa kugu-hagi doona albaaba 7 admiga, dhaqan celiyaha, ama maa’mulaha. Tan ayaa naga caawineysa inaan ardayda ku heyno meel qaas ah sida aan u ilaalino iyo socodka gaadiidka.
Dhamaan ardayda waa inay ka baxaan iskuulka ugu danbeyn 4:00 galabnimo. Haddii ay u joogayaan Macallin ama ciyaaro, waa inay la joogaan macallinka/tababaraha ugu danbeyn 4:00 galabnimo ama waxaa laga qodsanayaa inay ka baxaan iskuulka.
Ardayda looma ogolaan doona inay ku sugaan iskuulka dhexdiisa gadiidkooda. Fadlan u qorsheyso sida ku haboon cimilada qabow/qoyan.
Muhiimada kowaad ee Dugsiga Dhexe ee Justice Page ayaa ah amniga ardayda iyo shaqaalaha. Nidaamkaan ayaa naga caawin doona nabadgalyada, illaaliska, iyo socodka gadiidka ee iskuulka. Waad ku mahadsan tahay la shaqeyntaada.